Stephen King, tenzi wekutya, munyori anotakura mimvuri mukati. | Zvazvino Zvinyorwa
Stephen King, tenzi wekutya
John Ortiz | | Bvunzo, Vanyori, Mabhuku, Literature, Novela, Zvinotyisa, dzakawanda
Stephen King - AP - PAT WELLENBACH
Mabhuku engano pfupi, enganonyorwa marefu, enganonyorwa pfupi. Stephen King akazviita zvese. Iye munyori ane hunyanzvi, akaburitsa mamwe makumi matanhatu nematanhatu, manomwe pasi pemanyepo Richard Bachman.
Akazvarwa muMaine munaGunyana 21, Stephen King munyori ane hunyanzvi hwesainzi, inoshamisa ngano, zvinyorwa zvekufungidzira, asi Iye anozivikanwa zvakanyanya nekutyisa kwake uye zvakavanzika zvinyorwa. Akatengesa anopfuura mamirioni mazana matatu emamiriyoni emanyowani ake pasi rese.
1 Stephen King anokurudzira
2 King mufirimu uye terevhizheni
3 Stephen King uye kutya mukati make
Stephen King anokurudzira
Pakati pesimba rake rakajeka ndeye HP Lovecraft. Kubatana pakati penzvimbo kana nguva dzinoshandiswa naMambo mumabhuku ake zvakajairika nezvaHoward Phillips.
Edgar Allan Poe inowanikwawo mumabhuku aMambokunyanya mukati Kupenya, uko kwete kungotaurwa chete nezve Rufu Rutsvuku, kana zvisiri izvo mukugadzirisa kwayo bhaisikopo pane chiratidzo chayo mumalita eropa anobuda mumakwenzi.
Mune ino novel unoonawo iyodoppelgänger>, izvo zvakaipa zvakapetwa zviripo muRed Rufu uye Iyo Kupenya, uye vanotungamira kurufu.
King mufirimu uye terevhizheni
Nekuda kwekukochekera kwemanovel ake uye nyaya pfupi, mazhinji ezvinyorwa zvake akagadziridzwa kune diki uye hombe skrini. Miniseries uye nhepfenyuro zvakatepfenyurwa paNetflix uye netambo, pamusoro peizvozvo iye akanyora semunyori muenzi pazvitsauko zvakasarudzika zvezvikamu zvinozivikanwa.
Asi ndiwo mafirimu akawana zvakanaka kwazvo. Hits senge Nhamo nemutambi Kathy Bates uye mutambi James Caan, kana Carrie, izvo zvakagadziriswa zvitatu, 3 zvefirimu uye imwe yeterevhizheni.
Jack Nicholson mukuita kwake mu < >
Kupenya kwakaitwa bhaisikopo nemutungamiriri akanakisa Stanley Kubrick. Asi kunyangwe iri imwe yeakanakisa kugadziridzwa kwakaitwa yeimwe yenhau dzake, idzi njere dzaisakwanisa kuwirirana, saka munyori anozviona seinosemesa uye asinganzwisise kubudirira kwayo.
Stephen King uye kutya mukati make
Izvo hazvina basa kana Stefano achinzi anotengeswa, kukanganisa kwake pasirese zvemabhuku hakungarambwe uye kunofanirwa kutariswa kune chero munhu anofarira rudzi kana anofunga basa mariri. Pfungwa yaMambo, yakataurwa naiye ega, izere nezvipoko nemadhimoni, nekudaro, kubva uko kunouya kutya kwepeni yake.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Stephen King, tenzi wekutya
Carrie, nyaya yekushungurudzwa kuchikoro